လာရောက်လည်ပတ်သူများအားဖြင့် Submitted ရုပ်ပုံများနှင့်ဆောင်းပါးများ | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
လာရောက်လည်ပတ်သူများအားဖြင့် Submitted ရုပ်ပုံများနှင့်ဆောင်းပါးများ
အောက်ကစီမံကိန်းများကိုအဟောင်း site မှဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏စီမံကိန်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်လျှင်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ဧည့်သည်စီမံကိန်းမှတ်ချက်စာမျက်နှာ သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံများကို upload နှင့်သင့်စီမံကိန်းကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်ရှိရာ။
ကဲန် Denman "ဟုအံ့သြဖွယ်ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည်သိုလှောင်မှုထဲကတစ်ခုပဲ့ချိတ်ဆောင်ခဲ့"Microsoft Word ကို format နဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကဲန်, ငါကိုအခြားသူများကဒီအသုံးဝင်သောတွေ့ပါလိမ့်မယ်သေချာဖြစ်၏။
ဤသူကားငါ၏အချော '' 56 Lightwin, မော်ဒယ် 3018 ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပိုင်းယူနစ်အသစ်ဖျံနှင့်အတူတစ်လျှောက်ပြည့်စုံညှိတက်ကိုပြု၏။ အဆိုပါတင့်ကားချို၏နံပါတ်နှင့်မူရင်းဆေးသုတ်တော်တော်မကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ခဲ့ဖူးကတည်းကငါကဆင်းချွတ်ရုံအကြံပေးအဖွဲ့နှင့် cowlings ခြယ်။ ငါသည်လည်းဒါကိုယ့်လက်သည်အကြံပေးအဖွဲ့ဒိုင်းလွှားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပန်းကန်ခြယ်သစ်ကို decals ဆန့်ကျင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤကွီးစှာသောအပြေးနည်းနည်း kicker ဘေ့နှင့် bluegill များအတွက်ငါးမျှား, အထက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားရှိ Lake Kewoee န်းကျင်တစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောကလစ်မှာငါ့အ 8 '' dinghy တွန်း။
ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်သည်ပိုင်တစ်ဦး '' 58 ဂျွန်ဆင် Seahorse 5.5hp ပဲ့ချိတ် (ဓါတ်ပုံများပူးတွဲ) ရှိသည်။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသစ်ဝယ်ယူ Milwaukee တွင်အားကစားဆိုင်မှသူနှင့်အတူသွားသတိရနိုင်ပါတယ်။ ငါဖြစ်နိုင်မော်တာသူ့ဟာသူထက်မကြီး၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အမြေအောက်ခန်း / ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာလှည့်ပတ်ကန်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအ 25 + နှစ်များတွင် run နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ငါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမှမခံနိုင်ပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိရာက resuscitate စတင်ရန်မသဲလွန်စရတယ်။ ကိုယ့် profuse အသေးစိတ်အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းကိုဖော်ပြသင့် web site ပေါ်တွင်လဲ။ ငါသည်ဤငါ့ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်ဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်စေသင်ပြောပြရန်စတင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုအတူတကွကြောင်းအချက်အလက်ချပြီးသို့သွားလေ၏သောအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်တယ်။ ငါမျှော်လင့်ဒီရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအသက်ပြန်ရှင်ဖို့ငါ့အ seahorse ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
ဂျင်မ် Rosenkranz (အတ္တလန်တာ)
မင်္ဂလာပါတွမ်။ ဆိုက် Love ။ အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤတွင်ငါ၏အ 1964 ဂျွန်ဆင် 3HP အချို့ pics ဖြစ်ကြသည်။ အကြှနျုပျ၏အဖွားငါ့ကိုဒီမော်တာနှင့် (ငါ၏အအဘိုးပိုင်ဖို့အသုံးပြု) ဟောင်းဖိုက်ဘာမှန်လှေကိုပေး၏။
အဆိုပါမော်တာကောင်းသောအသွင်သဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုပြင်ဆင်စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတက်ဖမ်းယူနားဆင်ခဲ့သညျ။ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေသူ Mike နဲ့ကျွန်မလုံးကြောင့်စစ်တယ်။ က2အစစ်အမှန်ပြဿနာများကိုသာ။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုမူလကွိုင်နှစ်ဦးစလုံးကြော်ခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါလှုံ့ဆျောဖို့ဝက်အူအိုးအိမ်လေထုကိုစို့နှင့်မော်တာ overheat ဖို့လှုံ့ဆျောဖြစ်ပေါ်စေသမျှသောလမ်း seating မခံခဲ့ရပါဘူး။ ယခုက၎င်း၏ကြီးမြတ်သူတွေကို Fixed !! ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ site ကိုများအတွက်မဟုတ်ခဲ့လျှင်ငါဘယ်မှာစတင်ရန်သိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အာရုန် Publicover
ငါ ..... ငါသင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာကိုအောက်ပါကဲ့သို့ပကတိပုမော်တာ၏2ဓါတ်ပုံပူးတွဲငါဟောင်း Gheenoe နှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာတွေအများကြီးရှိခြင်းခဲ့
အဆိုပါ Johnson အဓိကအား .... အသစ်ကဲ့သို့ပြေး ကျနော်တို့ဘေ့နှင့်ညို pearch ဘို့ပဲ trolls.
ငါသည်သင်တို့၏ဆောင်းပါးရဲ့သုံးပြီးငါ့အမော်တာကိုအလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပြီးဆုံးနှငျ့သငျကအောငျမွငျခဲ့ကွောငျးကိုသိစေချင်တယ်။ ဒေသခံ Marina သည့်မော်တာကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်တန်ဖိုးရှိမဟုတ်ခဲ့ကြောင့်အပြေးဖို့ $ 500 ကျော်ငါ့ကိုကိုးကားဟုပြောသည်။ ငါ carb ကိရိယာအစုံ, မှတ်, condenser, ကွိုင်, ပလပ်နှင့် lube ပြန်ဆောက်ငါလှုံ့ဆျောအတူကသို့အကြောင်းကို $ 120 ရှိယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုစတော့ရှယ်ယာပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မအိုင်ထဲသို့ရကလုပျနိုငျသောအရာကိုကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။ ဒါဟာသိပ်ပထမဦးဆုံးဆွဲအပေါ်စတင်ခဲ့ပြီး! ဤသည်မော်တာကြှနျုပျ၏မယားအဘိုးပိုင်နှင့် 40 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုအတွက် run မထားပါဘူးသူမ၏ဦးလေးကမိမိအမြေအောက်ခန်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖူး, သူကတကယ်လောင်စာခဲ့ပါသို့မဟုတ်တင့်ကားအတွက်တဦးတည်းအချိန်ကလောင်စာအဘယ်အရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောင့်အမှန်တကယ်တွေအများကြီးငါ့ကိုထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်ပြီးမြောက်ဖို့ကအလွန်လွယ်ကူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။